Ogaden News Agency (ONA) – Abraha : Wiil baad tahay “wedhi-now” ,, markale ayaan is arkaynaa.
Abraha : Wiil baad tahay “wedhi-now” ,, markale ayaan is arkaynaa.
Waxaan soo galay goor ay 2dii duhurnimo tahay Boostada Godey oo koox wayaane ahi haysato. Ma gali kartid ayay dheheen, waan gali baan ku idhi ana. Waxaa jooga Madaxa Siyaasada Qaybta weyaanaha Q/dahare degan Moole, madaxa taliyaha Sahanka Ciidaanka 1aad Itobiya (misraaq-iist ) la yidhaahdo ee Adari degen Col. Taweldhe, madaxa Hawlgalada gaarka ah ee Qaybta Q/dahare dhamme Abraha (ganay), taliyaha Ciidanka Godey Taadhese. Maxaad ka rabtaa boostada ayay i dheeheen, waxaana ii turjumaya Guddomiyaha Gobolka Doolo Cabdi-madoobe (qurux). Waxaan la hadli ayaan ku idhi M/weynhii Kildhiga Marxuum Xasan Jire Qalinle oo kolkaas joogey Adisababa ee idinkuna madaxdiinii la hadla oo waxan joojiya ayaan ku idhi waa xasuuq waxaad waddaane. Moole wuxuu yidhi; “Anagu Tigre baan nahay oo waa hore ayaan wadahadalaye idinku Ogadeen ahaan wadahadla oo ama is-dhiiba ama iska kaana celiya.”
Markay kabtaas marayso ayuu Cabdi-madoobe yidhi war ninmanka soo ma maqlaysid waxay leeyihiin aan ninka dilo ee meeja inaga dhaqaaji .. meeju waa deyrka dhexdiisa siliga Boostda. Cabdi iyo Labo boolis ah ayaa ila socota waxaa dusha naga soo istaagay sadex askari oo wayaane ah si xaydabid ah, markaas ayaan wiilashii la hadlay deedna dusha ayay ka sii mareen wayaanhii. Madaxii weyaanuhu intay is deymoodeen ayay indhaha iskala hadleen oo muujiyeen inaan fahanay oo aan fashilinaya qorshe ay wateen. Kolkaas ayaan u soo dhaqaaqay dhismihii boostada dhexdiisa ileen waxaa ku jira Abhara oo dad lays ah oo aad u dhibi jirey shacabka. Sidaadaan u galay ee aan bidix ugu leexday dhanka albaaka shaqaaluhu ka galaan centeralka boostada ayaa Abraha fag ka soo yidhi oo Pistolad koodka iga saaray. Naxdin iyo amakaag bay igu noqotay markaan il-bimiriqsiyo aamusnaa ayaan pistoolad la soo baxay oo aan gadhka hoostiisa ka saaray si degdeg ah. Markaan dhowr il-biriqsi isku haynay ayuu iga dabciyey oo qoslay oo yidhi wiil baad tahay “wedhi-now” markale ayaan is arkaynaa.
Waan waayay Xasan Jire. Waxaan wacay Xafiiska Raysal-wisaarha Atoobiya oo wagaa Tamirat layne ahaa, waxba nagama khuseeyaan waxa Godey ka dhacaya ayay iigu jawaabeen.
Waxaan ugu geesisanaa markaan aniga oo dhuumanaya oo raad-gadanaya aan soo galay Jigjiga ee aan dhexdegay meeja Amxaaradu ugu badantahay ee deedna aan u galay nin odayaasha ka mid ah oo maalmo ka hor lagu handadday gurigiisii Diridhabe oo lagu yidhi Caddaani waad isu egtihiin dhowr-goorna gurigaaga ayuu yimid maxaad isu tihiin dhab ahaan? Hadda meeja uu joogana noo sheeg, maalin kaa la handaday waxaa la tusay sawirkey ah oo dhex taagan suuqii Taywanka la odhan jirey ee Diridhabe. Labo saac kadib ayuu iigu yimid Xawaalad KHadar Macalin ku lahaa Hoteel Karaamardha agtiisa, aniga oo Khadar ka baryaya inuu i sii siiyo lacag Mareykan la iiga soo diri lahaa oo labo maalmood kadib iman lahayd uuna ii diidan yahay. Odaygii ayaa wuxuu i weydiiyey imisa ayaad rabta? Waxaan ku jawaabay 2000 Bir Xabash, wuu ii soo fidiyey durba kii oo naxsan kana baqayay in la qabto oo waliba la’ila qabto isaga oo i agtaagan madaama saacad ka hor la ii haystay isaga oo la lahaa sheeg xagee buu joogaa.
Iyada oo ay intaas noo horeysay uuna moodayo in aan maalinkiiba baxay ayaan ugu soo galay guri jiif ama Hotel ku yaala Jigjiga. Wuu amakaagay oo yidhi; “War awawgii lagub meeja maxaa weli ku dhigey?” Waxaan ku idhi; “Eegadan haddaan nooli kale i siinweydo Amxaarada ayaa i qaban ee maxaad samayn?” Wuxuu hadana i siiyey lacag aan 1500 inay ahayd u malayn. 24 saac gudahooda ayaan baxayaa ayaan ku idhi. Ka darane waxaan weeraray Alle ha u naxariistee Maxamed Ugaas Mahad. Wuxuu markaa yahay madax Hoggaanka Nabadgalyada Barlamaanka Kildhiga, deedna wuu qaadan waayay oo yidhi; “War soo kii Samoore ii sheegey in aad Jabuuti gashay ma aha!”. Waa hore ayaad sheegi baan ku idhi, inaan ku xidhaan rabaa ayaan ku idhi isna inaan ku xidhi buu Alle ogyahay ayuu ku jawaabay. Marakaan cabbaar isu bootaynay ayuu yidhi; “Meeja waan idinka xoreynaye maxaad rabtaan harag shabeel baad tihiine dantaa garo hoy wiil yahow”. Waxaan ku idhi hadaadan baad keenin waxaan ahay sahan, ciidan xoogan ayaana baladka ku jira waan uun kuu soo tilmaami. Intuu lacag ii soo taagay ayuu yidhi maydkaaga iga qari ma daawan karee koley waa lagu diliye.
Intaa markaan sameeyey oo 2dii duhurinmo ay Jigjiga tahay ayaa magaaladii dabayl boodh badan qarisay. Xuseen gabood oo ila socday ayaan idhi ina keen. Waxaan aadnay kontoroolka koonfureed ee Jigjiga deedna gaadhi Wardheer u baxahaya ayaan heley oo Xaaji Maxamad uu wato. Waxaan ku idhi labo nin oo wanted ah ayaan nahay, taliyhii Boliska oo boolis deydeyayo ayaan ahay Dukumentigii Boliska iyo shaabadihiisiina waa kuwan ee meel ku qari anagana na qari lacagna kuma siineynyo ayaan u raaciyey. Nus iska bixiya ayuu iigu jawaabay waayahay baan ku idhi. War aayar fuula oo is maacuudiya oo iska dhabacda si aan la dareemi karin iska dhiga ayuu yidhi. Waxay iigu darayd markaan soo gaadhnay kontoroolka Q/bayax ee dhankaan eegaba mid boolis ah oo i garanaya aan arko ama mid shaxaat doon ah oo aan ganayo arko oo aan kolba dhinac u jeedsado.
Waxaan caadi noqday markuu gabalkii dhacay ee aan Araarso ka leexanay Awaare oo Wayane fadhiyo ayaan habeen badhkii maray 4tii hiraabta ayaan N/dariiq nimid, xaafaa salaama xero nabaadiino ayaan galay. Barqadii dambe ayaan ka lugaynay dhexda ayaan ku oomay waa ani iyo Xusen Gabood, reer reer Cali geele ayaan biyo iyo shaah weydiisanay, gabdhbaa tidhi war adiga ku gartey oo wiilashanadii baad tahaye Xusen Gabood ayay ku jeedaa ee kan xageed ka keentay? waa gudoomiyihii Kililka oo aan soo qabanay ayuu ku yidhi. Shaah Darmuus ku jira intay dhulka dhigtay ayay dhakhso uga laxaad satay islamarkiiba waa iyada oo koox Haween ah oo Tibab, budhadh, mindiyo gudumo iwm oo hugun ka soo baxayo lala yaabi waa kuwan. Gabood wuu kaftama-hayaye xaajo wey kululaatay. Anigu waan daalay oo ma ordi karo wiil yar oo ciidanka ahina wuu nala socdaa qori ma wadano, kolkaas dhaar iyo baryo naga dhamaatay. Goor dambe oo aan sigtay ayay naga qaboojiyeen weerarkii iyaga oo ii cadhaysan marti galyadiina shaahii bay ku ekaatay xili kulul ayaan boqooley oo aan cararay. Habeenkii dhexda ayaan barinay rer geeley ah ayaa caano aad noo siiyey. subaxii baan tagnay Xaruntii JWXO.
waa sheeko aad umacaan cadaani siduu sheegay oo kale ayuu ee gasheekeeyay xuseen gabood inta danbe